Booying 'kana booda dhaabbata amanamu miti' - BBC News Afaan Oromoo
Booying 'kana booda dhaabbata amanamu miti'
Akka Zifooraa Kuriyaa kan balaa xiyyaara 737 Max abbaan ishee du'e jettutti, Booying kana booda dhaabbata amanamu miti.
Aadde Kuuriyaa qaama hordoffii nageenya Daandii Qilleensaa Awurooppa waliin Roobii wal agartetti: "Booyiing cinatti tasumaan jecha amantaa jedhu hin fayyadamu," jette.
Erga xiyyaarri 737 Max hojii dhaabee booda Booying maqaa isaa eeggachuun falmaa jira.
Dubbi himaan dhaabbatichaa "nageenyi imaltootaa fi hojjatoota xiyyaara keenyaa xiyyeefannoo keenya isa jalqabaati," jedheera.
"Dhugumaan dhiifama jenna, maatiifi hiriyyoota namoota balaa xiyyaaraa Lion Air balalii 610 fi Daandii xiyyaaraa Itoophiyaa balalii 302 irratti lubbuun isaanii darbeef gadda keenya ibsina," jedha.
Booying xiyyaarota Max 737 omishuu dhaabuuf
Aadde Kuuriyaan namoota balaa kanaan maatii isaanii dhaban biroo waliin ta'un Eejensii Nageenyaa Daandii Xiyyaaraa Awurooppa (EASA) waliin kan dubbatan xiyyaarri Booying 737 Max qorannoon cimaa osoo hin gaggeefamiin hojiitti akka hin deebine mirkaneeffachuufi.
Abbaan dubartii lammii Biriteen kanaa, Jooseef Wayitikaa, namoota 156 balali daandii xiyyaa Itoophiyaarra turan biroo waliin Bitootessa keessa lubbuun isaanii darbeera.
"Kanaan dura yoo amanamoo ta'niis - kana booda garuu amanamoo miti," jetti Aadde Kuuriyaa.
Daarektarri olaanaa EASA Patrik Kay xiyyaarri 737 Max daandii qilleensa Awurooppaaf nageenya ga'aa qabaachuuf dhiisuu mirkaneessu irratti Bulchiinsa daandii qilleensaa federaalaas (FAA), hordoftoota Ameerikaas ta'e Booyiingiif 'harka akka hin kennine' waadaa naaf galaniiru jetti.
Booying yeroof xiyyaara 737 Max oomishuu Amajjii kessaa dhaabe
Booyiing xiyyaara Max jalqaba bara dhufu keessa qilleensatti deebisuuf FAA irraa eeyyama argachuuf abdata, ta'us garuu hariiroon cimaa FAA'n Booyiing waliin qabu xiyyeefannoo jala galeera.
Dhiyeenya kana balaa isa jalqabaa Onkololessa bara darbee booda FAA'n balaan biraa uumamuu akka danda'u osoo beekuu xiyyaarri 737 Max balalii akka itti fufu eeyyamuu isaa barameera.
Aadde Kuuriyaan " Qorannoon dabalataa yeroo gaggeeffamutti dhimma 737 Max irratti sababoota dabalataa Booyingiin hin amanne argachaa jirra," jetti.
"Waantooti dhoksamuu irra hin jiraanne dhokfmanii turan, kan darbamuu hin qabne darbameera. Yeroo aanga'oota geejjiba qilleensaa kamiyyuu waliinu teenyee haasofnutti du'uu maatii keenyaa kan dhorkamuu kan danda'u akka ture barra," jetti.
Qorattoonni nageenyaa Awurooppaa xiyyaara kanaaf "eeyyama haaraa keennuuf yeroo isaanii ni fudhatu " jedha Obbo Kay.
Sodaan isheen xiyyaaricharraa qabdu rakkoo to'annoo balaliinsa balaa lamaan geessise qofa osoo hin taane rakkoolee gurguddoo biroo 737 Max irra jirani dha jetti Aadde Kuriyaan.
Akka Aadde Kuriyaan jettutti EASA'n " adeemsa nageenyaa ciccimoo xiyyaara 737 Max irra jiran hunda irra deebiin akka qoratanidha."
Daqiiqaa 27 dura
Godaantota Afrikaa Ispeeniitti daldala daandiirraa hanga kophee ofiisaanii oomishuutti